Takers(2010) – Channel Myanmar
IMDB: 6.5/10 55517 votes
(ရသအပွညျ့အဝခံစားနိုငျစရေနျ Blu-Ray 1080p 5.1 CH, Blu-Ray 720p တို့ဖွငျ့
လူ(၄)ယောကျ အခနျးတဈခုထဲမှာ ဆုံကွတယျ…စကားအနညျးငယျပွောပွီးတာနဲ့
အသငျ့ပါလာတဲ့ အနကျရောငျဝတျစုံတှလေဲလိုကျကွသလို မကျြနှာဖုံးစှပျအနကျ
တှလေညျး ဝတျဆငျလိုကျကွတယျ…M4A1 Carbine နဲ့ Glock စီးရီးအလိုကျ
သိပျမကွာဘူး..လောဈ့အိနျဂလြိဈမွို့တှငျးက ဘဏျတဈခုကို ဓားပွဝငျတိုကျကွတယျ….
ဘယျလောကျတောငျ ရဲတငျးလှနျးသလဲဆိုတော့ ဘဏျစာရေးမကိုတောငျ ရဲစခနျးကို
ကိုငျး ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး….
LA ရဲတှကေရော အမိဖမျးနိုငျပါ့မလား…
ဒီလောကျသှေးအေးပွီး အစီအစဉျတကြ ဓားပွမှုကြူးလှနျနိုငျလောကျအောငျ
ပရိသတျတှနေဲ့ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈတဲ့ Fast & Furious မငျးသား Paul Walker နဲ့ Idris Elba တို့ အဓိက ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ….အမိုကျစား ဘဏျဓားပွကားထဲက တဈကားအပါအဝငျဖွဈလို့ ခပျလနျးလနျး စဆုံး Tempo မကတြဲ့ကားတှမှေ
သဘောကတြဲ့ပရိတျသတျတှအေဖို့ လကျမလှတျသငျ့ပါကွောငျး ညှနျးဆိုပါရစေ….
(ရသအပြည့်အဝခံစားနိုင်စေရန် Blu-Ray 1080p 5.1 CH, Blu-Ray 720p တို့ဖြင့်
လူ(၄)ယောက် အခန်းတစ်ခုထဲမှာ ဆုံကြတယ်…စကားအနည်းငယ်ပြောပြီးတာနဲ့
အသင့်ပါလာတဲ့ အနက်ရောင်ဝတ်စုံတွေလဲလိုက်ကြသလို မျက်နှာဖုံးစွပ်အနက်
တွေလည်း ဝတ်ဆင်လိုက်ကြတယ်…M4A1 Carbine နဲ့ Glock စီးရီးအလိုက်
သိပ်မကြာဘူး..လောစ့်အိန်ဂျလိစ်မြို့တွင်းက ဘဏ်တစ်ခုကို ဓားပြဝင်တိုက်ကြတယ်….
ဘယ်လောက်တောင် ရဲတင်းလွန်းသလဲဆိုတော့ ဘဏ်စာရေးမကိုတောင် ရဲစခန်းကို
ကိုင်း ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး….
LA ရဲတွေကရော အမိဖမ်းနိုင်ပါ့မလား…
ဒီလောက်သွေးအေးပြီး အစီအစဉ်တကျ ဓားပြမှုကျူးလွန်နိုင်လောက်အောင်
ပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Fast & Furious မင်းသား Paul Walker နဲ့ Idris Elba တို့ အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်….အမိုက်စား ဘဏ်ဓားပြကားထဲက တစ်ကားအပါအဝင်ဖြစ်လို့ ခပ်လန်းလန်း စဆုံး Tempo မကျတဲ့ကားတွေမှ
သဘောကျတဲ့ပရိတ်သတ်တွေအဖို့ လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း ညွှန်းဆိုပါရစေ….
File Size : (1.95 GB), (850 MB) and (335 MB)
Translated by Thithtoo Zaw
Chris Brown Gaius Charles Gideon Emery Glynn Turman Hayden Christensen Idris Elba Jay Hernandez Johnathon Schaech Marianne Jean-Baptiste Matt Dillon Michael Ealy Nancy Wetzel Nancy Young Nicholas Turturro Paul Walker Steve Harris T.I. Trevor Donovan Zoe Saldana Zulay Henao
Option 1 drive.google.com 1.95 GB Blu-Ray 1080p 5.1 CH
Option2drive.google.com 850MB Blu-Ray 720p
Option3drive.google.com 335MB 360P
Option4Soliddrive.co 1.95 GB Blu-Ray 1080p 5.1 CH
Option5Soliddrive.co 850MB Blu-Ray 720p
Option6Soliddrive.co 335MB 360P
Option7fastload.cc 1.95 GB Blu-Ray 1080p 5.1 CH
Option 8 fastload.cc 850MB Blu-Ray 720p
Option9fastload.cc 335MB 360P
Option 10 disk.yandex.com 1.95 GB Blu-Ray 1080p 5.1 CH
Option 11 disk.yandex.com 850MB Blu-Ray 720p
Option 12 disk.yandex.com 335MB 360P
Option 13 megaup.net 1.95 GB Blu-Ray 1080p 5.1 CH
Option 14 megaup.net 850MB Blu-Ray 720p
Option 15 megaup.net 335MB 360P
Option 16 mega.nz 1.95 GB Blu-Ray 1080p 5.1 CH
Option 17 mega.nz 850MB Blu-Ray 720p
Option 18 mega.nz 335MB 360P
Option 19 1fichier.com 1.95 GB Blu-Ray 1080p 5.1 CH
Option 20 1fichier.com 850MB Blu-Ray 720p
Option 21 1fichier.com 335MB 360P
Option 22 mirrorace.com 1.95 GB Blu-Ray 1080p 5.1 CH
Option 23 mirrorace.com 850MB Blu-Ray 720p
Option 24 mirrorace.com 335MB 360P
Hold Up(2010) 2010
Dragons Forever (1988) 1988
The Legend Of Yang Jian ( 2018 ) 2018
The Tracker (2019) 2019
Miss Bala (2011) 2011
Cellular (2004) မြန်မာစာတန်းထိုး 2004